Madaxweyne Xasan oo Kismaayo uga qeybgalay caleema saarka gudoomiyaha baarlamanka Juba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo Kismaayo uga qeybgalay caleema saarka gudoomiyaha baarlamanka Juba
A warsame 7 May 2015 7 May 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa ka qeybgalay caleema saarka, gudoomiyaha baarlamaanka Juba oo Kismaayo lagu qabtay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbad ka jeediyey munaasabadda caleema sarrka, gudoomiye Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan.
Madaxweynaha ayaa ugu horeyn sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in maanta la caleema saaro Baarlamaanka Jubba, waxaana warbixin uu ka siiyay ka qeyb galayaasha munaasabadda horumaradii kale duwanaa ee Soomaaliya ay gaartay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay horumarka la gaaray in daliil ay u tahay wadadii dheereed iyo marxaladii aan soo marnay iyo halka maanta aan taaganahay oo uu tilmaamay in lagu sifeyn karo yadadiilo wanaagsan oo horseed u ah xoojinta dowladnimada.
“Waa in aan isku sabarnaa oo aan fiirino mustaqbalka umadda Soomaaliyeed islamarkaana aan ka fekerin waxa maanta aan rabno laakiin aan ka fekerno mustaqbalka Berito, waxaana u baahan wixii shalay in aan ka daawowno oo aan u sabarno maslaxadeyna maankana ku heynaa, beri maxaan u baahanhay xagee wax ka qaldameen sidee lagu sixi karaa” ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbadiisu eheyd mid dheer ayaa waxa uu maamulka Jubba uu ugu baaqay in ay badiyaan tanasulka islamarkaana ay is dhageystaan kana soo baxaan go’aamo wax dhisaya.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in cabasho ay qabaan beelaha qaar ee daga gobolada ku abtirsada maamulka Jubba loona baahanyahay in mas’uuliyiinta maamulkaasi ay xaliyaan cabashooyinkaasi, islamarkaana ay qanciyaan dadkaasi maadaama mas’uul ay ka yihiin ayna ku biiriyaan xubnaha maamulka.
Wasiiradda Arrimaha Dibada Itoobiya iyo Kenya oo gaaray magaalada Kismaayo